Xoghayaha Horumarinta Caalamiga ah Priti Patel ayaa maanta ku baaqday dadaal cusub oo dheeri oo wadajir ah si looga hortago in malaayiin qof u dhintaan
Saacadaha dunida laga soomo Bishan Barakaysan ee Ramadaan waa ay kala duwan tahay waxaanay ku xiran tahay juquraafi ahaan dalka uu dal kastaa ku dhaco
Muwaadiniin American ah oo la helay Maydadkooda Kadib Markii ….
Todobo badmaaxayaal Mareykan ah oo sarnaa markab dagaal oo uu leeyahay Mareykanka, muddo laba maalmood na la la’aa ayaa la helay iyagoo meyd ah, ka dib markii markabkoodu uu ku ...
Dowladda Jabuuti ayaa ku eedeeysay dalka ay deriska yihiin ee Eritrea in ay ciidamo geysay xadka ay ku muransanyihiin labada dal. Wasiirka arimaha dibadda Djibouti, Maxamuud Cali Yuusuf,ayaa sheegay in ciidamada ...
Shil Markab oo ka dhacay Xeebaha Japan “Markab Dagaal ayaa ku dhacay Markab Xamuul”
Todobo kamid ah ciidamada badda ee Mareykanka oo sarnaa Markab dagaal oo la yirahdo USS Fitzgeralds ayaa la la’yahay kaddib markii markab ay sarnayeen uu ku dhacay Markab kale oo ...
Golaha Amaanka oo ku Baaqay in Degdeg looga Jawaabo Weeraradii Posh iyo Pizza.
Golaha amaanka Qaramada Midoobe ayaa ka hadlay weerarkii habeenkii Khamiista soo galeysay Alshabaab ay ku qaadeyn maqaayadaha Posh Treats iyo Pizza House oo ay ku dhinteyn ku dhawaad 20 ruux ...
Sucuudiga: “Waan ka xunnahay weerarkii Pizza, waana caawin doonaa Ciidanka Somalida”.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda boqortooyada Sacuudi Carabi ayaa cambaareysay weerarkii ismiidaaminta ahaa oo ururka Al-shabaab ay ku qaadeen maqaayada Pizza House oo ku taalla degmada Hodan. Mas’uuliyiin ka tirsan Wasaarada Arrimaha Dibadda ...
Madaxwaynaha Turkiga oo DFS ugu baaqay in ay ku adkaysato Go’aaka ay ka qaadatay Muranka Khaliijka.
Madaxwenaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa masuuliyiinta dowladda federaalka Soomaliya ku bogadiyey mooqifkii ay ka qaateyn qilaafka U dhaxeeyo wadamada Gacanka Carbeed . madaxweyne Erdogan ayaa go”aan geesinimo ah ku tilmaamey ...